Contacts, Phone Dialer & Caller ID အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（18.0MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Contacts, Phone Dialer & Caller ID: drupe
Caller ID, spam လက္ခဏာများနှင့် spam များကိုကြည့်လိုပါကသင်၏ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်မှတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုပါသလား။ Drupe သည်သင်၏ app ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသုံးစွဲသူသန်း 20 ကျော်ကိုယုံကြည်သည်။
ရိုးရှင်းသောဖုန်းစာအုပ်အက်ပလီကေးရှင်းများအကြောင်းကိုမေ့လိုက်ပါ။ သင်၏အဆက်အသွယ်အမည်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုတစ်နေရာသို့အတူတကွ စုစည်း. သင်၏ဖန်သားပြင်များအားလုံးမှလက်လှမ်းမီသည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုဆက်သွယ်ချင်ပါသလား မည်သူမဆိုခေါ်ဆိုပါသို့မဟုတ်စာပို့? အသံခေါ်ဆိုမှုများ? အဆက်အသွယ်သို့အဆက်အသွယ်သို့ပွတ်ဆွဲပြီးထိတွေ့ပါ။ ရိုးရှင်း။
Drupe app ကိုထောက်ပံ့သည် - Deutsch, အင်္ဂလိပ်, Español, França, Nederlands, Portuughs, Portukçe, Türkçe, türkçe, уاااעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע한국어။ >
ခေါ်ဆိုမှု, စာသား, စာသားသည်သင်၏အဆက်အသွယ်စာရင်းတွင်မည်သည့် app ကို သုံး. မဆိုသင်၏ဆက်သွယ်ရန်စာရင်းတွင်မည်သူမဆိုထံသို့ဆက်သွယ်ပါ။
★ SMARD Dialer
- Cross App ဟုခေါ်သောအစာရှောင်ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုခေါ်ဆိုခြင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်လွယ်ကူသော
b> built in acr အသစ်> ဝင်လာသောသို့မဟုတ်အထွက်ခေါ်ဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ။
★ DRUPE ID အမှတ်အသားကိုရှာဖွေရန် Smart Caller ID Tracker & Blocker သည်သင်၏ Blacklist သို့ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရှာဖွေခြင်းကိုရှာဖွေရန်ကူညီလိမ့်မည် - အသေးစိတ်ကိုပြပါ Telemarketers (သို့) မသိသောနှင့်လျှို့ဝှက်မိုဘိုင်းနံပါတ်များကိုသင့်အားခေါ်သည့်။ မည်သည့်အချိန်၌မဆို "ငါ့ကိုခေါ်တဲ့သူ" ကိုသတိရပါ။ သင့်ကိုခေါ်။ မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုရှောင်ကြဉ်သူတွေရဲ့နာမည်တွေရဲ့အမည်များကိုဖော်ထုတ်ပါ။
★ သင့်ရဲ့လိပ်စာစာအုပ် / ဖုန်းစာအုပ်ကိုစုစည်းပါ > - မိတ္တူပွားများကို Google Contacts ပြ issues နာများကိုဖြေရှင်းပါ။ ဖုန်းစာအုပ်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ ... ★ one one leandsapp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, Google Duo, တယ်လီဖုန်း Messenger နောက်ထပ်။
★ Unified "လတ်တလော" လတ်တလော "လတ်တလော" လတ်တလော "Feed" Facebook, Walkie -talkie အသံတိတ်အသံစာရင်းများ, Reverse lookup ကိုသင်၏ခေါ်ဆိုမှုသမိုင်းတွင်အမည်မသိသောနံပါတ်များ
- သတိပေးချက်များ, အချိန်သို့မဟုတ်အခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်သော
Missed Calls Calls Missions Missions
- ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, SMS, WhatsApp သို့မဟုတ်အခြားသို့မဟုတ်အခြားသို့မဟုတ်အခြားခေါ်ဆိုမှုများကိုပြန်သွားပါ။ နောက်မှသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ရန်သတိပေးချက်များကို snooze
★ သည်အမည်များ, လိမ်လည်မှုများ, robocalls သို့မဟုတ် telemarketers, ရှာဖွေခြင်း, ရှာဖွေခြင်း, ပိတ်ခြင်း, သူတို့ကိုပိတ်ဆို့ဖို့အပေါ်!
★ call recorder in call recorder (call call call) ၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်နှစ်ဖက်စလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် (သို့) လိုအပ်သည့်အခါသာခေါ်ဆိုမှုအသံဖမ်းစက်ကိုဖွင့်ပါ။
t9 & dual sim နှင့်အတူစစ်မှန်တဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်အက်ပလီကေးရှင်း dial-sim br> caller id (ဖော်ထုတ်သူ) Finder & SPAM add add add ad add add add ad add ad add ad add add add ad add) သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကခေါ်ဆိုမှုများ။ သင်၏ခေါ်ဆိုသူများကိုမည်သူခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်သူကိုအမြဲတမ်းသိပါ။
incoming & armo uncoming ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက် built-in Auto Call Recorder Rememining Missed ခေါ်ဆိုမှုမန်နေဂျာ ခေါ်ဆိုသူ -ID တည်နေရာ။
un Unified မကြာသေးမီကဆက်သွယ်ရေးမှတ်တမ်း - ခေါ်ဆိုမှုများ, SMS, Messaging နှင့်အခြားအရာများ A အလိုအလျောက်အကြိုက်ဆုံးများ View
သင်၏ Dialer သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်များကိုဝင်ရောက်ရန်ပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်အတူအမြဲတမ်း activate လုပ်ပါ
sms ၏ဇာတိ Android functions များနှင့်အတူချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ခေါ်ဆိုမှု, SMS, ပြက္ခဒိန်, အီးမေးလ်နှင့်အခြားအရာများ။
❄❄: WhatsApp, Faceboap, Tango, Google Duo, allows alo & alo alo & more all
သင့်ရဲ့ Drupe နှင့်ဆဲလ်ဖုန်းကိုကြည့်ရှုရန်, ပင်မမျက်နှာပြင်မှအဆက်အသွယ်များ။ dialer ရှိနံပါတ်များကိုစာရိုက်မှတဆင့်ရှာဖွေပါ။
❄သင်၏အကြိုက်ဆုံးများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအက်ပ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။ itside ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုမွမ်းမံခြင်းဖြင့်အကူအညီရယူပါ - Facebook နှင့် Hearts အတွက်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုကူညီပါ။ နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်သတင်းများ - http://facebook.com/getdrupe/
ဘာအသစ်လဲ Contacts, Phone Dialer & Caller ID: drupe 3.6.5
Ta Ang Lay
Contacts Phone Dial
Mya Mya Hnin Lwin